Arbetsförmedlingen, Migrationsverket oo noqday hay’adaha loogu necebyahay Sweden | Somaliska
Hay’adaha dowliga ah kuwa loogu necebyahay ayaa waxaa kaalinta koowaad ka galay Arbetsförmedlingen, Migrationsverket iyo Försäkringskassan sida lagu soo bandhigay afti ururin laga sameeyay shacabka Sweden. Dadka wareysiga laga qaaday ayaa muujiyay in aysan aad ugu qanacsanayn shaqada ay qabtaan hay’adahaan.
Sababta ay hay’adahaan dadku u necebyihiin ayaa lagu tilmaamay in ay ka dambayso maadaama ay hayaan shaqo muhiim ah oo mararka qaar siyaasad ku lug leh sida shaqada, soo galootiga iyo caymiska. Sidoo kale waxaa la sheegay in guud ahaan aysan shaqo fiican qaban, tusaale ahaan Arbetsförmedlingen ayaa la wada ogyahay in aysan wax la taaban karo u qaban dadka shaqo doonka ah.
Arinta Migrationsverket ayaa salka ku haysa siyaasada, maadaama ay aad u kordhayso dadka ka soo horjeeda soo galootiga, iyadoo loo arko Migrationsverket in ay dadka si sahlan sharciga wadanka ku siiyaan ama aysan si qoto dheer u baarin kiisaska. Waxaa sidoo kale ka soo horjeeda Migrationsverket dadka soo galootiga doonaya, iyagoo lagu eedeeyo in ay waqti dheer qaataan isla markaana ay wadanka dhowr jeer ka musaafuriyeen dad dhibaataysan.
Sidee u aragtaa shaqada ay qabtaan hay’adahaan? maku qanacsantahay shaqadooda? ku darso fikradaada.
ASc waxay ila tahay haayada uugu liidata inay tahay arbetsförmedlingen Waa magac uyaal dadkana shaqo mageeyaan xiitaa macalinkayga practikalka ayaa iisheegay inay ay iyaga xiita (swedishka) ay neceb yihiin Arbetsförmedlingen. Wuxuu yidhi wixii ka dambeeyay 90 talet waxay noqdeen magac uyaal aan dadka wax uqaban.